Hitranga ny fiovana 2009 | Martech Zone
Hitranga ny shift 2009
Sabotsy, Janoary 9, 2010 Alakamisy, Jona 11, 2015 Douglas Karr
Ny fanovana sy ny hafatra ao Mitranga ny fiovana dia mampino. Na dia miresaka ny fandraisana haingana ny haino aman-jery sosialy sy ny teknolojia aza izy dia mbola marihiko ihany fa ny isa marobe dia mbola maneho ny ampahany kely ihany amin'ny resaka fandraisana an-tanana. Ny orinasa dia mbola manam-potoana hanamboarana, hitrandrahana ary hahazoana ny anjaran'ny tsena raha toa ka mihetsika izao.
Tsindrio ny lahatsoratra raha tsy hitanao ny Mitranga ny fiovana ao amin'ny fahana na mailakao.
Tsy sasatra amin'ireo mihitsy aho! Misaotra an'i @amystark noho ny nanondroany ahy.
Tags: 2009mitranga ny fiovana
Topi-maso mialoha momba ny HTML 5
Fepetran'ny fiovam-po amin'ny bilaogy momba ny asa
Jan 11, 2010 ao amin'ny 9: 14 AM
Janoary 11, 2010 amin'ny 6:38 PM